Ubuntu Touch isungula i-OTA-13 yayo kwaye iba ngama-25% ngokukhawuleza | Ubunlog
Namhlanje, nge-22 kaSeptemba, ndinika ingxelo okokuqala ukumiliselwa kwe Inguqulelo entsha yoBuntu bokuChukumisa ukuba ngumsebenzisi wenkqubo yokusebenza kwi IPineTab yam. Nangona kulungile, kuya kufuneka ndithethe izinto ezimbini malunga nayo: kwiPineTab (kwaye andazi ukuba ikwiPinePhone, kuba andinayo), uhlaziyo aluveli njenge "OTA", kodwa njenge " Inguqulelo X ". Kwelinye icala, ndikwi «Umgqatswa» ijelo, ke andazi (kwaye ndicela) ukulingana.
Kwimeko nayiphi na into, yintoni uye wazisa kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo UBports yi Ukuqaliswa kwe-OTA-13 ukusuka Ubuntu Ukuthinta. Nangona ababhekisi phambili besixelela ngezona ndaba zibalaseleyo, ndingathanda ukuphinda ndive izimvo ezandisiweyo phakathi kwabasebenzisi: Isikhangeli seMorph ngoku sinamanzi ngakumbi, luphuculo olubaluleke kakhulu kwinkqubo yokusebenza apho uninzi lwezicelo ziyiwebhu kwaye isikhangeli esisekwe.
1 Amagqabantshintshi e-Ubuntu Touch i-OTA-13
2 Uyifaka njani i-OTA-13
Amagqabantshintshi e-Ubuntu Touch i-OTA-13
Phakathi kwezona zinto zintsha zibalaseleyo, sinazo:
Inkxaso yezixhobo ezingaphezulu kwifowuni:
Isony Xperia X.
I-Sony Xperia X ehambelana.
Ukusebenza kweSony Xperia X.
I-Sony Xperia XZ.
QtWebEngine 5.14 (ukusukela ngo-5.11). Oku kubangele ukuba ihlaziye kuhlobo lwamva nje lwe-injini yeChromium kwaye yile nto yenza ukuba uMbhrawuza weMorph kunye neappapps zibengcono. Ikwaphucula isenzo sokukopa kwaye sinokuvula i-PDF, i-MP3, iifoto kunye neefayile zombhalo kwiqhosha elivulekileyo.
Iimpawu ezindala ziye zafunyanwa kuseto lweNkqubo.
Olunye uphuculo lobuhle ngokubanzi.
Ukuphuculwa kwemiyalezo, iifowuni kunye neefowuni zonxibelelwano.
Uyifaka njani i-OTA-13
Izixhobo ezixhaswayo ziya kuba nakho ukufaka i-OTA-13 ukuya kuseto lweNkqubo / uHlaziyo kwaye ucofe ku "Jonga uhlaziyo". Inguqulelo entsha sele ihanjisiwe kwisiteshi esizinzileyo, ke iya kubonakala nakubasebenzisi abalumkileyo kakhulu. Abo kuthi bakwimeko yonjiniyela okanye umjelo wesithethi banezinye iinguqulelo ezikhoyo ezinamanani ahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Ubuntu Touch isungula i-OTA-13 yayo kwaye kwezinye iindlela yi-25% ngokukhawuleza
Abaqhubi be-NVIDIA 455.23.04 bakhutshiwe kwaye bafika benenkxaso ye-RTX 3080